News | गृह मन्त्रालय
News | Tag: गृह मन्त्रालय
गाईगोरु मृत फेला परेको विषयमा छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयद्वारा समिति गठन
काठमाडौं । सुर्खेतमा २४ गाईगोरु मृत फेला परेको विषयमा गृह मन्त्रालयले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
गृह मन्त्रालयद्वारा ३१ प्रजिअको सरुवा, काे कहाँ पुगे ?
काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, उपसचिव र सहसचिव गरी ३१ जनाको सरुवा गरेको छ ।
विभिन्न कार्यालयकाे २६ जना सरूवा, प्रजिअ सबैभन्दा धेरै
काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ), सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा विभिन्न कार्यालयका उपसचिव सरुवा गरेको छ ।
सभ्य तवरमा हाेली मनाउन गृह मन्त्रालयकाे आग्रह
काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले खुशियाली साटासाट गरी मनाइने होली (फागु) पर्व मर्यादित रुपमा मनाउन अनुरोध गरेको छ ।
गृह मन्त्रालयकाे पत्रमा अवस्थाअनुसार गाेली हान्न सक्ने अधिकार
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्तालाई अवस्थाअनुसार गोली हान्ने निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयको सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई पत्र लेख्दै अवस्थाअनुसार घुँडामुनि लाग्ने गरी गोली चलाउन सक्ने ‘अधिकार’ दिएको हो ।
उद्धार र विपद् व्यवस्थापनका लागि प्रहरीले माग्यो सातवटा हेलिकोप्टर
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले गृह मन्त्रालयसँग सातवटा हेलिकोप्टर खरिद गर्न बजेट माग गरेको छ । खोज तथा उद्धार र विपद् व्यवस्थापनका लागि सातवटै प्रदेशमा सातवटा हेलिकोप्टर आवश्यक भएको भन्दै खरिदका लागि प्रहरीले बजेट माग गरेको हो ।
गृहको एक वर्षः संरचनागत सुधार, शान्ति सुरक्षा र सुशासनको आधार
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले गएको एक वर्ष संरचनागत सुधार र शान्तिसुरक्षा तथा सुशासनको आधार वर्षका रुपमा केन्द्रित रहेको जनाएको छ ।
एसीकाे तार सर्ट भएपछि गृह मन्त्रालयमा अागलागी
काठमाडौं । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’का सुरक्षा सल्लाहकार डा. ईन्द्रजित राईको कार्यकक्षमा आगलागी भएको छ ।
११ जना एसएसपी डीआईजीमा बढुवा सिफारिस, पहिलो नम्बरमा विनोद शर्मा
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीका ११ जना प्रहरी बरिष्ठ उपरिक्षक (एसएसपी)हरुलाई प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआईजी) बढुवामा सिफारिस गरेको छ । शनिवार बसेको बढुवा समितिको बैठकले बिनोद शर्मा घिमिरेलाई एक नम्बरमा बढुवा सिफारिस गरेको छ भने विकास श्रेष्ठ दुई नम्बरमा डिआईजी बढुवाका लागि सिफारिस भएका छन् ।
४ डिआईजीसहित २७ एसएसपीको सरुवा, को–कहाँ भए ? (सूचीसहित)
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीका चार डिआईजीसहित २७ जना एसएसपीहरुको सरुवा गरेकोा छ । बुधबार साँझ मनत्रालयले उनीहरुको सरुवा गरेको हो । सरुवा हुने डिआईजीहरुमा सुरेशविक्रम शाह, महेश विक्रम शाह, सुरज केसी र धिरु बस्न्यात रहेका छन् । बस्न्यातलाई अपराध अनुसन्धान विभाग अ.नि. ब्यूरोबाट प्रहरी प्रधान कार्यालय सुरक्षा सेवा निर्देशनालयमा सरुवा गरिएको छ ।